Njem gaa Desert Tabernas na Almería ma ọ bụ Spanish Far West | Akụkọ Njem
Maria | | Almería, Ihe ị ga-ahụ
Ọzara Tabernas. Foto site na Chema Artero
Otu n’ime ebe kachasị mkpa agwaetiti Iberian Peninsula bụ Ọzara Tabernas, naanị otu ọzara na Europe. Ọ dị na Almería, n’agbata Sierras de los Filabres na Alhamilla, ebe ọ bụ n’etiti narị afọ nke XNUMX ọ ghọrọ nnukwu ihe nkiri esere maka nrụpụta mba na mba.
Ejikọtaghị ọdịdị ala ya na ala mmiri na akụkọ ifo Wild West dị ka 'The Good, the jọọ njọ na ndị ọjọọ' kamakwa na fim ndị nke oge a dịka 'Indiana Jones na Crusade Ikpeazụ'. Ya mere, Kedu ihe ọ bụ banyere ọzara Tabernas nke na-adọrọ uche gaa n'ụwa nke sinima n'ụzọ siri ike?
Ọ nwere ike ịbụ ọdịdị ala ọnwa ya, nke jupụtara na iyi na boulevards akọrọ, nke profaịlụ nke ugwu dị na mbara igwe na-ekpuchi ya na nke sitere na ya mara mma pụrụ iche na-esite na mgbe anyanwụ dara mgbe ìhè anyanwụ na-acha ọbara ọbara na-ekpuchi mpaghara ahụ dum. Anyanwụ, okpomoku dị elu na enweghị mmiri ozuzo emeela ka steepụ mara mma na ọnọdụ ibi ndụ siri ike ebe ọ bụ naanị obere ifuru na anụmanụ bara uru.
Foto site na Spain Classic Raid
N'ebe ọdịda anyanwụ nwere mmasị, a na-agbakwunye uru gburugburu ebe obibi dị elu n'ihi na e nwere ụmụ anụmanụ na ụdị osisi ndị dị iche site na ụkọ ha, ọtụtụ pụrụ iche na Europe na ọbụlagodi n'ụwa. Kpamkpam, n'ihi ọgaranya nke avifauna, ekwuputara ebe a Ebe Nchedo Pụrụ Iche maka Nnụnnụ.
Ozugbo ọ ruru Ọzara Tabernas, onye njem ahụ ga-achọpụta ozugbo na ọ nọ n'ime ala ebe ọdịiche dị. Ala na-enweghị ihe jikọrọ ọnụ na Cabo de Gata na Mediterenian na-ekpo ọkụ, nke bụ otu n'ime ebe kachasị mma mara mma n'ụsọ osimiri Andalusia.
1 Ọzara Tabernas na sinima
2 Utezọ nke Trilogy Dollar
Ọzara Tabernas na sinima
Ọzara Tabernas bụ paradaịs nke ihe nkiri Hollywood n'oge 60 na 70s nke narị afọ nke XNUMX. N'ebe a, a zụlitere ọkwa ndị ahụ iji nye ndụ anụ ọhịa na West West na kpakpando dịka Clint Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Alain Delon, Sean Connery, Raquel Welch ma ọ bụ Orson Welles, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, gafere ha. Okirikiri ala ya megharịrị ihe nkiri sitere na nnukwu ihe nkiri na akụkọ ihe mere eme nke sinima dị ka: "Lawrence nke Arabia", "Cleopatra", "Ndị ọma, ndị jọrọ njọ na ndị ọjọọ", "Ọnwụ nwere ọnụ ahịa" ma ọ bụ "Indiana Jones na ọgụ ikpeazụ ”.
Ozugbo ahụ ọkụ maka ihe nkiri ndị ọdịda anyanwụ gafere, kama ịkwatu usoro a, ha jiri ohere amụọ ogige ntụrụndụ akpọrọ Ebe a na-adọba ụgbọala na Parque Oasis Poblado del Oeste ebe a na-emegharị obere obodo nke West West na ụfọdụ akụkọ ifo nke ọdịda anyanwụ. Yabụ ị nwere ike ịga ngosi dị ka duels n'etiti ndị oji egbe, izu ohi n'ụlọ akụ, nwere ike ịgba egwu na saloon, wdg. I nwekwara ike ịga na ebe ngosi ihe mgbe ochie atọ na-atọ ụtọ dịka:
Museumlọ ihe nkiri Cinema: O nwere nchịkọta ndị ọrụ ngo, akwụkwọ mmado (akwụkwọ mmado ihe nkiri nke ọdịda anyanwụ nke eserese na Almería) na ngwa dị iche iche ga-eme ka ị nwee ọ enjoyụ ịgagharị n'akụkọ ihe mere eme nke nka asaa, na-akwụsị nleta na ụlọ ochie na-arụ ọrụ.
Car Museum: Carsgbọ ala na ihe nkiri ihe atụ kachasị echekwala n'ọnọdụ zuru oke ebe ọ bụ na ha ji nnukwu ihe nkiri, nke mere Gary Cooper ma ọ bụ Clint Easwood, n'etiti ndị ọzọ, akụkọ.
Ogige Cactus: Ubi a bụ ebe obibi nke ihe karịrị 250 ụdị cacti sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Ọnụ ego tiketi bụ 22,5 euro maka ndị okenye na 12,5 maka ụmụaka. El Ebe a na-adọba ụgbọala na Parque Oasis Poblado del Oeste emeghe na ngwụsị izu na ngwụsị izu. Site na Ista ọ na-emeghe kwa ụbọchị mana maka ozi ndị ọzọ, ọ ga-adị mma ka ịkpọọ 902-533-532.
Utezọ nke Trilogy Dollar
Iji kwanyere oge gara aga nke Tabernas Desert dị ka ihe nkiri, ndị Junta de Andalucía gosipụtara n’afọ a ụzọ a na-akpọ Dollar Trilogy nke na-agafe ebe dị iche iche ebe ihe nkiri 'Maka ego ole na ole' (1964), 'Ọnwụ nwere ọnụahịa' (1965) na 'Ezigbo, ndị ọjọọ na ndị ọjọọ' (1966) ) site n'aka Director Sergio Leone, bụ onye akara ngosi ya bụ akara maka ọdịda anyanwụ.
Ebumnuche a bụ akụkụ nke ọrụ Gran Ruta del Cine por Andalucía, nke na-achọ inye onye njem njem nlegharị anya nke obodo ndị akara ngosi ha dabara na ebe eserese ihe nkiri nke bụ akụkụ nke isi ihe nkiri eserese na mpaghara ahụ.
Trilogy nke ụzọ Dollar nwekwara nzube ihe atụ n'ihi na ọ bụ ụzọ sinima mbụ gafere n'ógbè Almería, maka uru akara ya na ịma ama ya na 60s na sinima mba ụwa n'ozuzu ya na n'akụkụ ọdịda anyanwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Gaa njem na Tabernas Desert na Almería ma ọ bụ Spanish Far West
Islas de la Bahía, paradise Honduran ke Caribbean
8 kpokọtara ebe ke Spain (II)